Messi oo markii ugu horreysay ka hadlay wararka xanta ah ee sheegaya inuu ka tagayo Barcelona, muxuuse ka yiri kiiskii Neymar Jr?? – Gool FM
(Barcelona) 12 Sebt 2019. Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan inuu ka tagayo garoonka Camp Nou.
Lionel Messi ayaa xaqiijiyay inuu weli ku sugan yahay garoonka Camp Nou isla markaana uusan ku fikirin inuu ka tagayo kooxdiisa Barcelona, isagoo albaabada ka soo xiray dhamaan wararka ku saabsan ka tagistiisa naadiga reer Catalonia.
Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Blaugrana wuuuna yiri:
“Mustaqbalkeyga? Barcelona waa gurigeyga, ma doonayo inaan baxo, laakiin waxaan doonayaa inaan guuleysto”.
Intaas kaddib Messi ayaa wuxuu si qoto dheer kaga hadlay wararka ku aadanaa dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee garoonka Camp Nou inta lagu gudi jiray suuqii kala iibsiga xagaaga ee la soo dhaafay wuxuuna yiri:
“Waxaan rajeynayay inuu yimaado, runtii, ma garanayo inay Barca sameeyeen wax walba oo suurtogal ah si loo soo celiyo”.
“Waa run in wadahadal lala yeesho Paris Saint-Germain inaysan sahlaneyn, laakiin heerka kala duwan ee isboortiga, Neymar waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka”.
“Anagu ma codsanin in Neymar lala soo saxiixdo, laakiin waxaan sheegnay waxaan u aragnay si fudud. kama niyad jabin, waxaan heysanaa koox weyn, waana awoodnaa inaan kula dagaalano koobabka oo dhan Neymar la’aanteed”.